रबि मेरा लागि भगवान त हैनन् तर हौसलाकर्ता भने अवश्य हुन् - दिल निशानी - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
रबि मेरा लागि भगवान त हैनन् तर हौसलाकर्ता भने अवश्य हुन् – दिल निशानी
लेखक : दिलनिशानी मगर
रबिको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा ईशाले टाढैबाट खुसीको बर्षात चुहाउदै यो गित गाउनेछिन-“ तिम्रो मनमा लुकेको कुरा नभनेपनी भुलिदिनेलाई-सम्झीदिनेलाई माया त माया हो।” अनि रबिले सपथ खानेछन्- म बोल्छु सत्य मात्र बोल्छु- सत्य बाहेक अरु केही बोल्दिन। पदमा रहँदा- पदमा नरहँदा पनि म देशको भलो चिताई काम गर्नेछु। संविधानको रक्षा गर्नेछु।” जब संबिधानको रक्ष हुनेछ, यो देशमा डाँकाहरुको पनि सम्मान हुनेछ, लुटेराहरुको पनि ईज्जत हुनेछ। किनभने उनीहरुको पनि संविधान हुनेछ।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ; रबि र मेरो काल्पनिक झगडा खडा गरी न्यूज भाईरल गराएर पैसा कमाउनेहरुi सयौ छन्। तर यो कुरा रबि र मलाई थाहा छ। म बदनाम हुदाँ तपाईहरुको चुलो बल्छ भने जिन्दगीभरी नै बदनाम हुन चाहान्छु। एउटा अनलाईनमा “दिल निशानी मगरको असमायिक निधन” भनेर समाचार आएको रहेछ। केही आफन्तजनहरुमा रुवाबासी चल्यो। म ज्यूदै छु भनेर फोन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। टिपीआर बढाउने नाममा म जस्तो सामान्य मानिसको किन उल्टोपाल्टो न्यूज बनाउनु हुन्छ? तपाईहरुको फोहोरी चाकमा दर्द छ? यद्द्पी म कुनैपनी प्रकारको साईबर क्राईमको उजुरी गर्ने पक्षमा छैन। किनभने हाम्रो देशमा साईबर क्राईम समबन्धी बलियो कानुन नै छैन।
पहिलो पटक रबि न्याधिस जस्तो नबन, नागरिकका पनि हक छन्। चोर, फटाहा, डाँकालाई पनि सम्मानजनक ब्यबहार गर। मानवअधिकारको रक्षा गर्ने हो, क्यानेरा बोकेर मानिसका घर भित्र छिरेर के गरेको? भनेको थिए। त्यो बेला म राक्षस कहलिए। त्यो स्वभाविक पनि थियो। लडाईमा गोलीको मुल्य मान्यता हुन्न, जसलाई पनि गोली लाग्न सक्छ। रबि पनि लडाईमा नै थिए मिडियाबाट। यस्तो संघिन लडाई लड्दा अमेरीकाको नागरिता त्यागेर नेपाली भै लड भन्ने सुझाब दिदाँ झन् डरलाग्दो राक्षस भए म। तर आखिरीमा रबिले नेपालको नागरिता लिएरै छाडे। राष्ट्रबादी दबाब दिएकोमा मलाई त
फुलमाला लगाएर, धोडामा चढाएर बाजागाजाका साथ नगर परिक्रमा गराउनुपर्ने थियो। तर परन्तु आजको मिती सम्म राक्षस नै कहलिएको छु।
सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु, अनलाईन संचालकहरु मेरो दुईटा शब्द; “भाउजु र यार्सागुम्बामा” ३, ४ महिना सम्म रल्लिएर बस्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। खैर, दिल निशानी मगरले राम्रो भने पनि नराम्रो भनेपनी बिरध नै गर्नुपर्छ भन्ने ठुलो जमात छ। तिनीहरुले मेरा फोटोको गुरुपयोग गरेका छन्। तिनलाई म स्याबास भन्न चाहान्छु किनभने जसको दिमागमा जती गिदी छ त्यती नै काम गर्ने हो। मेरो कसैका प्रती रिसराग छैन। म संकिर्ण पनि छैन। महात्मा गान्धी र नेल्शन मण्डेलाको बायोग्रफी पढेर बस्ने म यस्ता हगुरे- पादुरे बिषयमा समय खर्च पनि गर्दिन यार।
हाँसले यौन सम्पर्क गरेको दृश्य नजिकैबाट हेर्न हुदैन भन्ने कुन सबिधानमा लेखेको छ?